နီကယ်ပစ်မှတ် Ni, တိုက်တေနီယမ်ပစ်မှတ် ပြေတီဦး, ဇင့်ပစ်မှတ် Zn, ခရိုမီယမ်ပစ်မှတ် Cr, မဂ္ဂနီဆီယမ်ပစ်မှတ် Mg, နီအိုဘီယမ်ပစ်မှတ် Nb, သံဖြူပစ်မှတ် Sn, အလူမီနီယံပစ်မှတ် အယ်လ်, indium ပစ်မှတ် In, သံပစ်မှတ် Fe, zirconium ပစ်မှတ် ZrAl, တိုက်တေနီယမ်ပစ်မှတ် TiAl, zirconium ပစ်မှတ် Zr, အလူမီနီယံဆီလီကွန်ပစ်မှတ် AlSi, ဆီလီကွန်ပစ်မှတ် Si, ကြေးနီပစ်မှတ် Cu, တန်တလမ်ပစ်မှတ် Ta, ဂျာမေနီယမ်ပစ်မှတ် Ge, ငွေပစ်မှတ် Ag, ကိုဘော့ပစ်မှတ် Co, ရွှေပစ်မှတ် Au, gadolinium ပစ်မှတ် Gd, lanthanum ပစ်မှတ် La, yttrium ပစ်မှတ် Y, cerium ပစ်မှတ် Ce, သံမဏိပစ်မှတ်, NiCr, Hafnium Hf, မို, FeNi, ဒဗလျူ, စသည်တို့.
အိုင်တီပစ်မှတ်များ, မဂ္ဂနီဆီယမ်အောက်ဆိုဒ် ပစ်မှတ်များ, သံအောက်ဆိုဒ် ပစ်မှတ်များ, ဆီလီကွန်နိုက်ထရိတ်ပစ်မှတ်များ, ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ပစ်မှတ်များ, တိုက်တေနီယမ်နိုက်ထရိတ် ပစ်မှတ်များ, ခရိုမီယမ်အောက်ဆိုဒ် ပစ်မှတ်များ, ဇင့်အောက်ဆိုဒ် ပစ်မှတ်များ, ဇင့်ဆာလ်ဖိုက်ပစ်မှတ်များ, ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပစ်မှတ်များ, ဆီလီကွန်အောက်ဆိုဒ် ပစ်မှတ်များ, cerium oxide ပစ်မှတ်များ, zirconium dioxide ပစ်မှတ်များ, niobium pentoxide ပစ်မှတ်များ, တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပစ်မှတ်များ, zirconium dioxide ပစ်မှတ်များ, hafnium dioxide ပစ်မှတ်များ, တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်ဘိုရိုက်ပစ်မှတ်များ, zirconium diboride ပစ်မှတ်များ, tungsten trioxide ပစ်မှတ်များ, အလူမီနီယမ် ထရီအောက်ဆိုဒ်သည် တန်တလမ် ပင်အောက်ဆိုဒ်ကို ပစ်မှတ်ထားသည်။, နီအိုဘီယမ် ပင်အောက်ဆိုဒ်သည် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဖလိုရိုက်ပစ်မှတ်များကို ပစ်မှတ်ထားသည်။, yttrium fluoride ပစ်မှတ်, ဇင့်ဆီလီနိုက်ပစ်မှတ်များ, အလူမီနီယမ်နိုက်ထရိတ်ပစ်မှတ်များ, ဆီလီကွန်နိုက်ထရိတ်ပစ်မှတ်များ, ဘိုရွန်နိုက်ထရိတ် ပစ်မှတ်များ, တိုက်တေနီယမ်နိုက်ထရိတ် ပစ်မှတ်များ, ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ပစ်မှတ်များ, lithium niobate ပစ်မှတ်များ, praseodymium titanate ပစ်မှတ်များ, barium titanate ပစ်မှတ်များ, lanthanum titanate ပစ်မှတ်များ, နီကယ်အောက်ဆိုဒ် ပစ်မှတ်များ, sputtering ပစ်မှတ်များ, စသည်တို့.
FeCo, AlSi, TiSi, CrSi, ZnAl, TiZn, TiAl, TiZn, TiZr, TiSi, TiNi, NiCr, NiAl, NiV, NiFe, စသည်တို့. 
အမျိုးမျိုးသော sputtering thin film material များကို semiconductor integrated circuits များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ (VLSI), optical discs များ, ပြားချပ်ချပ် မျက်နှာပြင်များ နှင့် workpieces များ၏ မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း, စသည်တို့. ၁၉၉၀ ခုနှစ်များကတည်းက, sputtering ပစ်မှတ်များနှင့် sputtering နည်းပညာ၏ တပြိုင်နက်တည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အမျိုးမျိုးသော အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းအသစ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်ချက်များကို များစွာဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသည်။. ဥပမာ, semiconductor ပေါင်းစပ် circuit ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်, အလူမီနီယံဖလင်ကြိုးကြိုးများအစား ကြေးနီစပယ်ယာဖလင်၏ ခံနိုင်ရည်နိမ့်သည်။: flat panel display လုပ်ငန်းတွင်, အမျိုးမျိုးသော display နည်းပညာ (LCD ကဲ့သို့, PDP, OLED နှင့် FED, စသည်တို့) တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အချို့ကို ကွန်ပြူတာနှင့် ကွန်ပြူတာများတွင် ခင်းကျင်းပြသထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။; သတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင်, သံလိုက်မှတ်ဉာဏ် သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်သည် ဆက်လက်တိုးမြင့်လာသည်။, အသစ်သော သံလိုက်ဓာတ်ဖမ်းပစ္စည်းများ၊ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များ၏ အရည်အသွေးအတွက် လိုအပ်သော sputtering ပစ်မှတ်များဖြစ်သည်။, ဝယ်လိုအားကလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးလာတယ်။.
အကြို: Tantalum ပန်းကန်ပြား